Iniesta Oo Isbuuc Kahor Xulkiisa Kula Guuleeystay Tartanka EURO 2012 Oo Aqal Galay(Daawo Sawirada)
Updated About:315 days ago 0
Xidiga naadiga Barcelona iyo Xulka Spain Iniesta oo xulkiisa isbuuc kahor kula guuleeystay tartanka Euro 2012 ee lagu soo gabagabeeyay wadamada Ukrine iyo Poland ayaa shalay la aqal galay Anna Ortiz, xaflada Arooska ayaa waxay kadhacday Qalcada lagu magacaabo Tamarit.
Wax yar kadib markii ay dhacday xaflada meherka Iniesta oo 28-jir ah ayaa waxaa soo baxday warar sheegaya in 3.9 million oo qof ay ubaxyo iyo hanbalyo usoo dhigeen Bogga uu kuleeyahay Tweetter-ka.
Iniesta oo ay xaflada arooskiisa kasoo qayb galeen dad gaaraya ilaa 700 oo qof waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay waqtiga cusub ee noloshiisa ubilaabanaysa sidookale waxa uu mahad celiyay dhamaan dadka kasoo qayb galay.
“Waad ku mahadsantihiin kasoo qayb galkiina wacan maalinta nolosheyda ugu farxada badan” sidaa waxaa yiri Iniesta.
Xaflada arooskan ayaa waxaa kasoo qayb galay laacibiin aad ufarabadan oo ay ugu horeeyaan laacibiinta ay isku kooxda yihiin ee Barcelona sida: Puyol,Messi,Xavi,Sergio,Pedro,Pique, iyo Goolhayaha Real-madrid Cassilas iyo xidigii hore ee kooxda Barcelona Eto sidookale waxaa soo xadiray macalinkii hore ee Barca Guardiola iyo macalinka xulka Spain Vicente Delposque. Iyo milkiilaha kooxda Barcelona Sandro Rossel.